Lo mkhiqizo ulungele ukukala kwamazinga okushisa kwabantu abadala, izingane kanye nezinsana. Kunconywa ukuthi abantu abadala basebenzise i-thermometer ye-infrared.
Ngaphezu kokuhlangabezana nezidingo zamandla aphezulu, ukuhuzuka okuphezulu, njll., Izingubo zokuzivikela zivame ukwehluka ngenxa yezinhloso ezahlukahlukene zokuvikela kanye nemigomo yokuvikela. Kusuka ezintweni zemvelo ezifana nokotini, uboya, usilika, nomthofu, kuya kuzinto zokwenziwa ezifana nerabha, ipulasitiki, i-resin, kanye nezinto zokwenziwa zefayibha Izinto zokwakha, izinto ezisetshenziswayo zesimanjemanje nezinto zokwakha. Inomsebenzi wokulwa nokungena, ukuvunyelwa komoya okuhle, amandla aphezulu, kanye nokumelana kwengcindezi ephezulu ye-hydrostatic.